Tech Rutsigiro | Shijiazhuang Neming Kunze & Export Co, Ltd.
Yedu softshell mabhachi akagadzirwa kubva mhando yekuita 3in1 machira.
Iyo yekunze yakatwasuka jira ndeye DWR yapera, yepakati ine TPU membrane, yemukati boned ne micro dehwe, Iyo jira haina mvura, isapinda mhepo uye inofema, ichikuchengeta iwe kuoma uye kugadzikana mune ako ese ekunze ezororo. Iko kusavhara kwemvura kunoita kuti mvura ibude kunze apo iyo hydrophilic yekufema sisitimu inobvumidza mwando wemukati kutiza. Mucheka weDWR wekunze unosimbisa mhando isinga pinde mvura uye unobatsira mvura kuti imhanye ichiwedzera pazvipfeko kuita kwemhepo.
Iyo inokodzera kunze kwekufamba, kudzika musasa, kukama kana chero kupi kumwe kwaunowana kwekunze kwekutora kunokutora iwe.
Chii chinonzi Running Shirt?
Shati inomhanya inowanzo gadzirwa nemachira ekuita uye yakagadzirirwa kunyaradzwa kwakanyanya uchimhanya. Mhando dzakasiyana dzakasiyana dzinogadzirwa kuitira kuti igadzirise mamiriro ekunze akasiyana, mhando dzekumhanya, uye zvaunofarira.
Vamwe vamhanyi vanopfeka yakajairwa, t-shati yekotoni yekumhanya, kunyanya kana ivo vari vekumhanya nguva nenguva kana vachangotanga mumutambo. Shati inomhanya ine zvakwakanakira zvakati wandei pamusoro peT-shati, inoratidzira kune wick ziya kubva paganda, inokurumidza kuoma, anti-UV, anti-hwema.
Mazhinji mahembe anomhanya akagadzirirwa mwedzi yezhizha uye tembiricha inodziya inoratidzira ziya-kunanzva uye hwema-kudzikisa tambo. Vamwe zvakare vane yakavakirwa-mukati UV kudzivirirwa. Micheka inosanganisira sirivheri kana ceramic fibers inopa zvese anti-ziya uye anti-hwema hunhu. Micheka inorwisa mabhakitiriya yakagadzirirwawo kudzikisa hwema.
Chinangwa chikuru chehembe yekumhanya yehembe ndeyekuti zvese zviri zviviri zvinodziya uye zvisina kureruka. Synthetic materials, zvakadai sepolyester uye fiber blends, inowanzoshandiswa. Kune mamwezve mahembe anomhanya echando anosanganisira hoods kana maburi ezvigunwe mumashure ekuvhara maoko zvishoma. Mumamiriro ekunze anotonhora zvakanyanya, zvakanakisa kupfeka muzvikamu, kusanganisira hembe inomhanya uye bhachi risingaremi rakagadzirwa nenylon kana chimwe chinodzivirira mhepo.
Mashati evarume nevakadzi anomhanya anowanikwa mune refu sleeve, pfupi ruoko, isina maoko, uye tangi masitaira. Kukodzera kwembatya idzi kunotangira pane yakasununguka kusvika yekumanikidza hembe, inokodzera zvakanyanya kwazvo. Neckline zvitaera zvinosanganisira zvinoseka mitsipa yekuwedzera kudziya, uye vashandi uye v-mutsipa masitaira. Zvimwe zvinhu dzimwe nguva zvinowanikwa mukumhanya shati dzinosanganisira hombodo dzakapetwa uye tambo dzakavanzwa kuchengetedza waya dzefoni.
Chii chinonzi mwenje unonamira jira?
Kupinza (Wicking) zvinoreva kugona kwemucheka iwoyo kubvisa mwando kure nemuviri uye nemucheka pachawo; kugona kufema uye kuchengetedza ganda remushandisi kuti riome kubva dikita.
Jira rekudonha, zvinoreva kuti jira rine ma capillaries madiki mariri akakura zvakakwana kuti hunyoro, seziya, ubviswe kubva paganda nekunze uye nekure. Izvi zvinogona kubatsira kuti muviri uome uye utonhore kunyangwe kana munhu adikitira kubva pakuedza.
Yedu yepamusoro yekuita, tekinoroji, yekufema jira, ingakuchengete iwe uome uye wakasununguka zuva rese. Usazvidya moyo nezve kudikitira futi.
Mucheka wewicking unoshandiswa munzira dzese dzekunze kubva pakumhanya kuenda kunokwira uye unoshandiswa mukati memwaka wese asi unonyanya kushanda mukutonhora kwakanyanya. Inogona kuita seyakanaka insulator, maererano nekupisa, futi. Yakanaka yemitambo, yekudzidzira kupfeka, base layer, yemitambo kupfeka etc.
Kushamba kwechando: maitiro ekupa yako T shati iyo vintage yakasakara kutarisa
Iwo akanakisa maT-Shirts haasi iwo matsva matsva, ndiwo iwo akapfekedzwa-mukati uye akapfava kubva kuwanda kuwacha. Ivo vane zvishoma zera kwavari. Nzira yekuwana yakadii vintage T shirt?
Pazasi pane maitiro eiyo chando yekugeza:
1, Dhidza iyo yakaoma yerabha bhora mu potassium permanganate
2, Dry gaya T hembe nebhora rerabha mumatanho akakosha anotenderera. Munguva yekuita iyi potassium permanganate inopera jira panzvimbo yekubatana
3, Tarisa maitiro ekugeza
4, Geza mumvura
5, Neutralization ne oxalic acid
6, Geza mumvura
7, Nyorera softener
Ipapo iwe unokwanisa kutora yako ichangopfekwa muvintage t shirt.
Ndokumbira utarise, izvi zvinofanirwa kugadzirwa nehunyanzvi yekuwachisa fekitori, uye panguva yekusona, unofanirwa kushandisa tsono yakakodzera yebhokisi uye shandura tsono munguva. Zvikasadaro, kune njodzi yekukuvadza yako T shati mukuwacha.